Kolontsaina… iarovan-tena sy enti-miady | NewsMada
Kolontsaina… iarovan-tena sy enti-miady
Par Taratra sur 26/08/2019
“Hatsahatra ireo fahazaran-dratsy sy ny kolontsaina tsy nahazoam-bokatra.” Anisan’ny hafatry ny filohan’ny Repoblika tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo io. Ireo minisitra no niantefan’izany mivantana sy voalohany?
Saingy misy ampahany na manontolo mety iombonana sy mampiombona ny rehetra ny amin’izay kolontsaina tsy nahazoam-bokatra izay. Tsy afa-bela na mpitondra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Na ny vahoaka hatrany ifotony…
Anisan’izay kolontsaina tsy nahazoam-bokatra izay, ohatra, ny fanaovan-javatra am-boalohany ihany noho ny hafanam-po na hambom-po na fitiavan-kiseho? Rehefa ela ny ela, ratsy noho ny teo aloha aza izay mitranga sy atao.
Mbola eo ny fiheverana fa tsy misy toa ny tena: tsy nisy inona vitan’ny teo aloha na ny hafa? Na tsy azo tohizina na hatsaraina ny efa misy sy vita, ary ifanomezan-tanana izay atao. Hany ka hoe sasatry ny miarina sy manarina?
Eo koa ny tsy fahazakana fifaninanana? Mba tsy hilazana hoe fialonana… Misy tsara azo na vitan’ny sasany? Tsy firy ny miteny hoe rahoviana ny tena no hahazo sy hahavita tsara lavitra, fa izay hahasimba azy no visavisaina mialoha.
Miara-dalana amin’izay ny tsy fahasahiana manova zavatra na miova lalana. Sao hialonana? Makamaka tahaka lava sy mitovitovy tsy mankaiza avokoa amin’ny marimaritra iraisana eo no iafarana sy ifampitaizan’ny rehetra hatramin’izay.
Saika miara-dalana amin’izay ny fianteherana lava amin’ny hafa na ny vahiny, na maka tahaka be fahatany amin’izany. Raha tsy izay, mifikitra amin’ny an’ny tena tsy foy hovaina noho ny fiheveran-tena diso fa tsy hoe fanetren-tena.
Tsy misy kolontsaina (h)azoam-bokatra ve amin’ny Malagasy? Efa kolontsaina ny valin’izay. Tsy (hay) ampiasaina? Voalohany sy lehibe indrindra amin’izany, ohatra, ny fahatahorana an’Andriamanitra, ny fihavanana, ny firaisankina…
Kolontsaina tsy hita hotanisaina? Ny mbola fahatahorana ny tsiny sy ny tody, ohatra, ny fifikirana amin’ny tanin-drazana na tany ngazana aza… Ahoana no hamadihana izany ho hery enti-miady sy iarovan-tena fa tsy hoe arovana fotsiny?